I-OEM & ODM Diamond Spring Matress Intengo Uhlu | Rayson
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Umatilasi weDayimane entwasahlobo besilokhu sitshala imali eningi kuMkhiqizo R & D, okuvela ukuthi siphumelele ukuthi sithuthukise umatilasi we-Diamond Spring. Ukuthembela kubasebenzi bethu abasha nabasebenza kanzima, siyakuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, izintengo ezinhle kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Uyemukelwa ukuxhumana nathi uma unemibuzo.Lokhu izici zomkhiqizo ezanele zokulula nokululama. Indwangu yayo idlulise izivivinyo ekwelule nasekululameni ngaphansi kwengxabano ebekiwe nokwandiswa.